Enwere ike ịkọwa hormon (Alarelin) nke Gonadotrophin dịka agonist LR-RH, nke na-arụ ọrụ site n'ịkwalite mmepụta na ntọhapụ nke LH na FSH site na glands gị. Ọgwụ a na-ewu ewu maka ịmalite ịzụ nwa na ọgwụgwọ endometriosis. Ọgwụ a na-ebute nsonaazụ ntipụta ebe ọ bụ na a chọpụtara na ọ nwere ike inye aka dị ukwuu dịka mgbakwụ na-eme agadi. Alarelin dị na ma ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa. Otú ọ dị, jide n'aka na ị zụrụ Alarelin site na a pụrụ ịtụkwasị obi na-emepụta Alarelin. Alarelin maka ire ere nwere ike ịdịgasị iche site na onye na-emepụta ihe ọzọ na-ekwu banyere mma na ịnye ọnụahịa. Enwere ọtụtụ Ndị na-ere ahịa alarelin na ahịa ma wepụta oge gị ịchọ ihe kacha mma. Nlekọta ọgwụ na-eme ka oke ruru ogo Alarelin.
The eke Alarelin (79561-22-1) ụdị dị iche iche na-anọ n'ime ụmụ anụmanụ, a na-ejikwa ha eme ka ụmụ nwanyị na-azụ nwa. A na-emepụta nsụgharị sụgharịrị ala nke alarelin site na iji onye na-eme LH-RH na-agbanye n'ọtụtụ dị elu karia nke LH-RH nke nwere ike ịchọta na nzuzo na vitamin na vitamin. Ọrụ alarelin bụ ịkpalite gland gọọmenti gị iji mepụta FSH-LH.
Dị ka e kwuru n'elu, Alarelin, ozugbo ọ banyere n'ime usoro ahụ gị, ọ na-akpali mkpụmkpụ pituitary gị iji mepụta hormones na-egbuke egbuke (LH) na hormones na-akpali akpali. Họnụm abụọ ahụ na-arụ ọrụ dị oké mkpa n'inwe ọganihu zuru oke nke nwanyị. FSH na-achịkwa ogo, mmepụta nwa, na pubertal maturation. N'aka nke ọzọ, na nwanyi, LH hormone na-ebute mmepe nke corpus luteum nakwa usoro nhazi. Maka nwoke, Alarelin na-arụ ọrụ site n'ịkpalite mmepụta nke hormone testosterone. Maka usoro mmepụta ahụ nke ọma, ahụ gị ga-anọ n'ọnọdụ iji mepụta LH na FSH. Peptide Alarelin nwere ike inye aka n'inweta mmepụta nke hormones abụọ ahụ dị mkpa. Otú ọ dị, jide n'aka na ị na-aṅụ ọgwụ ahụ n'okpuru ọgwụ dọkịta iji zere ịnweta mmetụta ndị dị elu. Alarelin na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ị na-eji usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị ma na-arapara na ntuziaka nduzi Alarelin gị. Ị nwekwara ike ịjụ ndị na-ere ahịa Alarelin banyere ọgwụ ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwa ọzọ.
A na-eji Alarelin mee ihe ka ukwuu maka nchọpụta ahụike iji ghọta ọgwụ ọjọọ ahụ n'ahụ anụ ahụ karịa maka ọnọdụ metụtara ọmụmụ ịmụ nwa. Ya mere, dị anya, a chọpụtawo ọgwụ ahụ iji soro n'ime ihe kachasị mma iji nyere ahụ mmadụ aka, karịsịa ụmụ nwanyị, iji meziwanye usoro ọmụmụ ha. Ụmụ nwoke nwekwara ike iji ọgwụ ahụ mee ka mmepụta nke hormone testosterone mepụta. Ngwa alarelin dabere na ndenye ọgwụ dọkịta gị. A na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe na ntụ ntụ na ụdị ọgwụ. Dọkịta gị ga - abụ onye kachasị mma iji duzie gị na ngwa Alarelin maka ọnọdụ ahụike gị mgbe ị nụsịrị nyocha ahụike. Na raw Alarelin ntụ ntụ a na-ejikwa ọgwụ eme ihe banyere Endometriosis ma ọ bụ Hysteromyoma.
Maka injections, ị ga-agbatị oge ọgwụ Alarelin oge niile ma nweta ọgwụ ahụ gị. Ị nwekwara ike ịbanye onwe gị n'ụlọ ma jide n'aka dọkịta gị na-azụ gị tupu ịmalite ịhazi nhazi. Cheta, emeghi ya Usoro alarelin nwekwara ike imebi ahụike gị ma ọ bụ nwee ike ibute nsogbu ahụike ọzọ. Ahịa Ịzụta maka ire ere na-enwe ike ịnwe ihe ize ndụ karị ma ọ bụrụ na ịnweta ya na ụlọ ọrụ ị na-enweghị ike ịtụkwasị obi. Onye na-emepụta ọgwụ n'Arerelin kwesịrị ịnye gị nduzi ejizi ọgwụ. Dọkịta gị kwesịkwara inyere gị aka ịzụta peptide Alarelin kasị mma ma ọ bụ ịnwere ike ịnweta ya na weebụsaịtị anyị.
Ugbu a, nwere syringe 1cc wee were ụdị diluent gị. Họrọ nyocha kwesiri ihe dịka dọkịta gwara gị ma ghara ịga maka obere ma ọ bụ karịa ihe edepụtara; ọ nwere ike iduga na mmetụta dị iche iche ma ọ bụ ghara iru ihe ndị a chọrọ Ihe alarelin.1 ml ma ọ bụ (cc) kwa 10mg vial nke melanotan pụtara na usoro ọgwụgwọ gị kwesịrị ịdị gburugburu iri iri na syringe U100 nke yiri 1mg nke Melanotan. N'aka nke ọzọ, 2 ml 9cc) kwa 10mg nke melanotan pụtara ihe iri ọ bụla na syringe U100 yiri 1mg melanotan.
Zụrụ Alarelin site n'aka onye nwere ahụmahụ na onye a tụkwasịrị obi maka gị ka ị nweta ọganihu Alarelin. Nke kacha mma Alarelin maka ire ere kwesịrị inye ihe ndị na-esonụ;
E wezụga uru alare Alarelin mara, ọgwụ a nwekwara akụkụ gbara ọkpụrụkpụ karị karịa mgbe a na-atụgharị ya. Otú ọ dị, ozu mmadụ mere ihe dịgasị iche na ngwaahịa dị iche iche. Ụfọdụ ndị na-enwe mmetụta dị ole na ole ma ndị ọzọ nwere ike inwe ahụmahụ jọgburu onwe ha ọbụna mgbe ha gbasịrị ngwa Alarelin ziri ezi. Otu ihe a metụtara ndị ọrụ Peptide Alarelin ma na-elele anya nyocha ndị ahụ, ị ​​ga-achọpụta na ọtụtụ n'ime ndị ọgwụ ọjọọ na-enwe obi ụtọ na ọgwụ ahụ, ma akụkụ nke ndị ọrụ nwere ahụmahụ ọjọọ na otu mmezi ahụ. Ụfọdụ n'ime obere mmetụta Alarelin gụnyere;
N'aka nke ọzọ, enwere mmetụta dị egwu Alare ndị ọzọ dị njọ nke ị nwere ike ịnweta mgbe ị na-eburu gị ọgwụ, ha na-adaberekwa n'otú ahụ gị si emeso ọgwụ ahụ. Ndị ọrụ na-edozi ọgwụ kachasị na-enweta ọganihu Alarelin n'ọdịnihu, mana nke ahụ abụghị mgbe niile. Ọ bụrụ na ị hụla mmetụta ọ bụla pụrụ iche ma ọ bụ ihe ịrịba ama na-agwa dọkịta gị ozugbo tupu ọnọdụ ahụ amalite njọ. Ụfọdụ n'ime nsogbu ndị siri ike gụnyere;
Mgbe ị natara ọgwụ sitere n'aka ndị Alarelin, ihe fọdụrụ na nchekwa bụ ọrụ gị niile. Emere alarelin ga-echetara gị otu esi echekwa ọgwụ. Kwesịrị ekwesị nchekwa ga-ekwe nkwa na ị kacha Alarelin uru. Dịka, ọgwụ a na-eguzosi ike n'ụlọ okpomọkụ, ma ọ bụrụ na ị ga-eji ya ruo ihe dị ka izu atọ, mgbe ahụ, ị ​​ga-echekwa Alarelin na mpaghara na gburugburu -18 degrees Celsius. Maka ụbọchị 2-7 nke ojiji, 4 degrees Celsius ga-abụ ọnọdụ nchekwa kacha mma. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji ọgwụ ahụ mee ogologo oge, a na-atụ aro ka ị gbakwunye protein ndị na-ebu nje dị ka 0.1% BSA ma ọ bụ. Cheta iji gbochie gelite-thaw cycles mgbe ịchekwa ọgwụ a.
Wei, S., Gong, Z., Dong, J., Xie, K., Wei, M., Zhang, J., na Wang, J. (2012). Mmetụta nke ọrịa ọgụ na-adịghị mma na nkwupụta nke GnRHR, FSHR na LHR na pituitary na distribution GnRHR na ovaries nke ewes. Jiangsu Journal of Agricultural Sciences, 28(1), 114-120.
Zhang, S., Han, J., Leng, G., Di, X., Sha, C., Zhang, X., ... & Liu, W. (2014). Usoro LC-MS / MS maka mkpebi siri ike nke goserelin na testosterone na plasma rat maka ọgwụ pharmacookinetic na ọgwụ pharmacodynamic. Akwụkwọ Chromatography B, 965, 183-189.
Ararooti, ​​T., Niasari-Naslaji, A., Asadi-Moghaddam, B., Razavi, K., & Panahi, F. (2018). Mmezi Superovulatory na-esonụ FSH, eCG-FSH na hMG na ọnụọ ime mgbe ị na-ebufe embray blastocyst embryos dị iche iche na ọdịdị na camel dromedary. Theriogenology, 106, 149-156.